Muhammad Bin Salmaan Jaarmayaalee Yahuudotaa waliin iccitiin mari'atuun isaa Saaxilame. - NuuralHudaa
Muhammad Bin Salmaan Jaarmayaalee Yahuudotaa waliin iccitiin mari’atuun isaa Saaxilame.
Muhammad Bin Salmaan Daw’annaa isaa kan Ameerikatti Jaarmayaalee Yahuudotaa waliin iccitiin mari’atuun isaa Saaxilame.
Dhaaltuun Gonfoo Maliika Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan, Imala isaa kan Ameerikatti godhe irratti hooggantoota Gareewwan fi Dhaabilee Yahuudotaa Jibbaa Islamummaa lellisuun beekaman kanneen akka AIPAC, Stand Up for Israel(ADL) fi the Jewish Federations of North America (JFNA) jedhaman waliin wal qunnamuun isaa beekame.
Dhabbiileen Yahuudotaa kunniin qubsuuma seeraan alaa lafa Faalasxinotaa irratti mootummaan Isra’eel ijaaruuf, deeggarsa maallaqa miliyoonaan lakkaa’amu godhuun kan beekkaman tahuus gabaasni Aljaaziiraa ni muli’isa.
Baha Jiddu-GalaaIsraa'elSa'uud Arabiyaa
May 23, 2022 sa;aa 1:34 am Update tahe